Yeedi 2 ngwakọ, in-omimi analysis of a smart robot agụụ Cleaner | Akụkọ akụrụngwa
Anyị laghachi na Akụrụngwa Ngwa na Yeedi, otu ụdị nke ndị na-ehichapụ robot na-achịkwa Amazon n'oge na-adịbeghị anya n'ihi oke mma-ọnụahịa ya. Obere nke nta ka a na-ahụ ya na Spain n'ihi nyocha a gbutere na Amazon na AliExpress, yabụ enweghị ike ịla n'iyi na tebụl nyocha anyị.
Anyị na-enyocha ígwè ọrụ ntanetị ọhụrụ Yeedi 2 ma kọọrọ gị ihe ahụmịhe anyị nwere na ngwaọrụ a zuru oke iji mee ka ụlọ gị dị ọcha. Chọpụta anyị niile ya uru ma n'ezie ọghọm. Echefula na nyocha ọhụrụ a dị omimi.
Na mbụ anyị na-echetara gị nke ahụ ị nwere ike ịzụta ngwakọ Yeedi 3 a site na euro 299,99 na Amazon, ya mere ọ bụrụ na ị maraworị ya, ọ bụ ezigbo nhọrọ site na ụlọ ahịa a ma ama iji mee ka nkwa ya dị ukwuu.
2 Nka na ụzụ na mmiri
3 Nhazi na ngwa
4 Nhicha, agụụ na mopping
Ngwakọta ngwongwo Yeedi 2 a na-eketa ụdị kpochapụwo nke ụdị ngwaọrụ a na akwụkwọ akụkọ ole na ole. Ngwaọrụ ahụ bụ nke plastik matte maka akụkụ ya dị elu, ebe anyị ga-ahụ bọtịnụ "ike" ya na ihe ngosi LED, igwefoto ga-ahụ maka ịdepụta mpaghara nhicha yana okpueze ahụ. Akara Yeedi na-anọgide na-acha ọcha, Ihe ijuanya na ihe eji eme ihe juru anyị anya nke ukwuu.
Akụkụ: 34,5 x 7,5 cm
Ibu ibu: 5,3 n'arọ
Na ala akụkụ e nwere abụọ n'usoro ahịhịa, Central mbuaha ahịhịa na n'usoro na abụọ eweli wiil. Akụkụ azụ maka tank mmiri, ebe a na-etinye tank unyi n'akụkụ elu n'akụkụ mkpuchi ahụ, dị ka ọ dị na ngwaọrụ Roborock. A na-arụkwa ntọala na-arụ ọrụ nke ọma, ọ nwere eriri USB na-ezo n'ime ya, ihe a na-enwe ekele iji mee ka ohere kachasị dịrị n'etiti ntọala na mgbidi.
Nka na ụzụ na mmiri
Anyị nwere ngwaọrụ a zụlitere n'ọtụtụ ebe, ọ nweghị ihe ọ bụla, ihe ijuanya na-atụle oke ọnụahịa. Banyere ike mmịpụta anyị nwere karịa pascals 2.500, n'ezie, a ga-agbanwe ha dabere na ọkwa ike atọ dị nke anyị nwere ike ijikwa dabere na ntọala ahụ.
N'elu Igwefoto Visual-SLAM dị, mgbe na akụkụ nke ala anyị nwere ihe mmetụta elekere na anya nke na-enyere robot aka ịnyagharịa gburugburu ụlọ nke ọma.
Batrị 5200 mAh maka oge 200 maka ojiji (na ọkara ike)
Ike nke ihe mkpofu bụ 430 ml, ebe mmiri mmiri ahụ ga-abụ 240 ml. Na ọkwa njikọ anyị nwere WiFi, mana anyị nwere ike naanị jikọọ ya na netwọk 2,4 GHz n'ihi ụzọ dị obosara ya, dịka ọ na-adịkarị na ụdị ngwaọrụ a.
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ị banyelarị na ngwaọrụ ahụ, anyị na-akwado ka ị lelee ntuziaka ntuziaka (dị n'ọtụtụ asụsụ ebe a). Otú ọ dị, na teknuzu ọkwa ya njikwa bụ nnọọ kensinammuo.
Nhazi na ngwa
Banyere nhazi anyị nwere ngwa Yeedi nke ahụ juru anyị anya site na atụmatụ ọma ya ma chetaara anyị ngwa ngwa Roborock, ebe dị mma iji zoo eziokwu.
Budata Yeedi maka gam akporo
Budata Yeedi maka iOS
Ngwa a ga - enyere anyị aka ijikọ rọbọt na usoro ndị a:
Anyị na-abanye ma ọ bụrụ na anyị chọrọ
Pịa na "tinye a robot"
Anyị na-abanye na WiFi netwọk na paswọọdụ ya
Anyị na-eche ka nhazi ahụ rụchaa
Usoro a dị mfe na QR koodu n'okpuru mkpuchi elu. Ngwa Yeedi a dị mfe, anyị nwere ike ịgbaso nhicha nke maapụ n'oge ma gosipụta nhicha naanị ụfọdụ ụlọ, machibido ebe ma ọ bụ hichaa ụlọ ahụ kpamkpam. Dị ka a tụrụ anya, na eserese ngosi anyị nwere ike ekenye ndị ọrụ ụlọ.
Maka nke ya, ee Anyị na-atụ uche nhọrọ iji hazie ike mmiri ọ bụla maka ime ụlọ ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ nwere onye na-ahọpụta ike ikike nke nwere ike ịdị iche n'oge nhicha.
Banyere mkpọtụ anyị nwere n’agbata 45 dB na 55 dB dabere na ike mmịpụta, ihe dị n'ime ụkpụrụ. N'ikpeazụ, anyị na-egosipụta nkwado zuru oke na Amazon's Alexa iji gwa gị ka ị malite ikpochapụ, otu ihe ahụ na Google Assistant. Na ule anyị olu onye enyemaka na-arụ ọrụ nke ọma.
Na mgbakwunye, ngwaọrụ ahụ Ọ nwere ọkà okwu ga-arụ ọrụ dị ka ọkwa ọkwa ma mgbe ọ malitere na mgbe ọ kwụsịrị, n'ezie na ị nwere oku na-aga maka enyemaka mgbe ị "tọrọ atọ."
Nhicha, agụụ na mopping
Banyere scrubbing, anyị nwere usoro nke disposable mops na anyị ga-etinye n'ime mmiri mmiri maka nsonaazụ kachasị mma, yana kpochapụ ahịhịa kpochapụla ebe anyị anaghị enweta nsonaazụ kwesịrị ịrịba ama ọzọ. Anyị na-adụ ọdụ ịnwale ịlele ebe nyocha mbụ ọ bụkwa na ebe nwere ala seramiiki mmiri kachasị mmiri nwere ike ịmepụta akara mmiri. Isdị mmiri a anaghị akwado ya maka ogologo oge nke parquet ma ọ bụ parquet, nke mere na anyị na-ahọrọ mgbe niile maka nhọrọ nke mmiri kacha nta.
Banyere agụụ, ike karịrị ihe zuru ezu na njem ya, ọ bụ ezie na ọ bụ na ụlọ nke ihe dịka 70m2 o were obere oge (ihe dịka nkeji 45) karịa ndị ya na ya nwere ọnụ ahịa dị elu, o meela n'ihi ọ na-emetụta ebe ọ mebururịrị, ihe na-enye ohere nnwere onwe ya ma hụ na ọ na-ekpochapụ ya nke ọma.
Nke a Yeedi ngwakọ 2 enyela anyị ahụmịhe “adịchaghị” n’okpuru euro 300 na ọ tụrụ anyị n’anya. Na ọkwa mmuta anyị nwere nsonaazụ dị mma, nke a ga-eji tụnyere ngwaahịa nwere ọnụahịa dị elu na nsoro abụọ na mmịpụta na ọchịchị obodo. Otu ihe ahụ na-eme na ngwa ahụ na-a drinksụ ihe ọ directlyụ directlyụ sitere na Roborock, otu n'ime ihe kachasị ezi na ahịa. Nsonaazụ njedebe na-erite uru site na ngalaba ndị a niile ma mee ka ọ bụrụ ngwaahịa amamihe dị n'etiti etiti.
N'otu ụzọ ahụ anyị na-ekwu na ọrụ nsị dị ka ihe na-adịghị mma dị ka ngwaahịa ndị ọzọ nke njirimara ndị a, ha na-aga n'ihu na-enye ihe ọzọ iji moisten ala nke na-adịghị eme ka m kwenye na m họrọ ịkwụsị. Agbanyeghi na igwefoto emegoro m ihe na-ato uto, nke na adighi nma ka eserese LiDAR, n'otu uzo o na - enye anyi ohere izoputa maapu. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ịnwere ike ịzụta ya na euro 299,99 na Amazon.
Yeedi 2 ngwakọ
Elu àgwà ihe na-ewu
Nnwere onwe dị ukwuu na ọnụego gbanwere
Ezigbo mmiri ikike
Kensinammuo ime ihe na mfe hazi
Scrubbing bụ mgbakwunye dị ala-uru
Naanị chekwaa maapụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Yeedi 2 ngwakọ, in-omimi analysis of a smart robot agụụ Cleaner